चीनमा फैलियो ब्यूबनिक प्लेग, भित्री मंगोलियाका गाउँहरु सिल « LiveMandu
चीनमा फैलियो ब्यूबनिक प्लेग, भित्री मंगोलियाका गाउँहरु सिल
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ११:५४
चीन, २६ साउन, २०७७ । ब्यूबनिक प्लेगबाट स्थानीयको मृत्यु हुन थालेपछि चिनियाँ अधिकारीहरुले गाउँ नै सिल गरेका छन् । मृत्यु भएका व्यक्तिलाई बिहीबार ब्यूबनिक प्लेग हो भन्‍ने कुरा पत्ता लागेपछि देशको भित्री मंगोलिया क्षेत्रमा पर्ने गाउँलाई सिल गरिएको छ ।
बउचोउ नगर स्वास्थ्य आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार ती व्यक्तिको मृत्यु बउचोउ शहरमा भएको हो । उक्त विज्ञप्तिका अनुसार ती व्यक्तिलाई रक्त सञ्‍चार प्रणालीमा गडबडीका कारण मृत्यु भएको बताएको थियो ।
तर, पछि उनलाई मुसाका कारण हुने ‘ब्यूबनिक प्लेग’ भएको खुलेको हो । उनलाई कसरी ब्यूबनिक प्लेग भयो भन्‍ने विषयमा केही खुलाइएको छैन ।
चीन सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा विश्‍वभर फैलिएको भन्‍ने आलोचना भइरहेका बेला अहिले तत्काल नै सिल गर्ने अभियान सुरु गरेको हो । स्थानीय सबैको जाँच गर्दा रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको जनाइएको छ ।
प्रशासनले हाल ३५ जनालाई निगरानीमा राखेको छ भने ब्यूबनिक संक्रमण भएको एकजनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखेको छ । त्यसैगरी नजिकैको दामाओ ब्यानर जिल्लामा रहेका गाउँहरुलाई लेभल-३ अलर्टमा राखिएको छ ।
समाचार फाइनान्सियल एक्सप्रेसको सहयोगमा तयार पारिएको हो
जुलाईको सुरुआतमा ब्यूबनिक प्लेगको दोस्रो केस फेला परेको थियो । यद्यपि पहिलो प्लेगको संक्रमित बाँच्‍नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
विश्‍व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार हरेक वर्ष एकदेखि दुई हजार मानिसहरुक प्लेगबाट मृत्यु हुनेका छन् । पछिल्लो समय चीनमा फेला परेको ब्यूबनिक प्लेगका विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
Stop All Flights To & From China! https://t.co/YBAtQwhk8i
— Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) July 7, 2020
के हो ‘ब्यूबनिक प्लेग’?
मुसा र त्यसका परजीवीमा पाइने येर्सिनिया पेस्टिस (#YersiniaPestis) नामक सूक्ष्मजीव नै प्लेग रोगको मुख्य कारण हो । यो एउटा घातक संक्रामक रोग हो जुन मानिसमा सजिलै लाग्न सक्छ । मानिसमा यो प्लेग रोग लागेपछि काँखी र तिघ्राको बीचमा दुख्ने र सुन्निएको डल्लो देखिन्छ । प्लेगका कारण सन् २०१० देखि २०१५ सम्म विश्वभरि यसका ३,२४८ बिरामी भेटिएकोमा ५८४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
“ब्ल्याक डेथ” अर्थात् “कालो काल” ले परिचित यस प्लेग रोग लागेका मानिसहरूको हात र खुट्टाको औँलाहरू ….पुरा पढ्नुहोस्